मोहिनी एकादशी : व्रत लिनाले सम्पूर्ण पापबाट मुक्ति पाईने धार्मिक विश्वास – Kamdardainik
May 3, 2020 JB Puri0Comments
प्रत्येक वर्ष वैशाख महिनाको शुक्लपक्षमा आउने एकादशीलाई मोहिनी एकादशी भनिन्छ ।यस एकादशीको भक्तिपूर्वक व्रत वस्ने,अर्चना गर्ने, एकादशी महात्मय सुन्ने गरेमा पाप मोचन हुन्छ र सांसारिक मोहवाट छुट्कारा पाइने कुरा शास्त्रमा वर्णन गरिएकोछ ।
युधिष्ठिरले मोहिनी एकादशीको बारेमा जान्न खोज्दा श्रीकृष्ण व्याख्या गर्नुहुन्छ । सरस्वती नदीको रमणीय तटमा भद्रवती नामको राम्रो शहर थियो । जसमा एकजना द्युतिमान नाम गरेका चन्द्रवंशी राजा राज्य गर्दथे । यसै राज्यमा एकजना धनधान्यले भरिपूर्ण समृद्धिशाली वैश्य अर्थात व्यापारी थियो जसको नाम धनपाल थियो । उ पुण्य कार्य अर्थात यज्ञशाला,मन्दिर,पोखरी,पाटीपौवा बनाईरहन्थ्यो ।
धनपालका ५ छोराहरु थिए जसमा कान्छो छोरा धृष्टवुद्धि नामको छोराचाही पाप कर्ममा रमाउँथ्यो । अन्याय गर्ने,जुवातास अनि वेश्यागमनमा आशक्त,बाबुको धन सम्पती स्वाहा पार्ने र सधै रक्सी पिईरहन्थ्यो । धनपालले केही नलागेपछि आफ्नो मनमा पत्थर राखेरै भएपनि घरनिकाला गरिदियो । घरबाट बाहिरिए पछि भोकले आकुल भई बाहिरि शहर तथा गाउँतिर भौँतारिन थाल्यो र खानेकुरो केही नपाएपछि चोरी कर्ममा लाग्यो । प्रहरीले पटक पटक पक्रिएपनि शहरको मान्यजनको छोरा भनेर सामान्य सोधपुछ गरि छोडिदिन्थ्यो ।
एक दिन ऊ भोक र प्यासबाट आक्रान्त भई आहाराको खोजीमा घुम्दै गर्दा कौडिन्य ऋषिको आश्रममा पुग्यो । त्यस समय वैशाख महिना चल्दै थियो र कौडिन्य ऋषि गंगा स्नान गरी फर्कदै थिए । उनको भिजेका लुगाको छिँटा पर्नाले उसलाई केही स्वुद्धि प्राप्त भयो र ऊ मुनिसमक्ष हात जोडेर भन्न थाल्यो – हे मुने ! मैले आफ्नो जीवनमा धेरै ठूला ठूला पापकर्म गरेको छु तपाईले ती पापहरूबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने सरल र साधारण अनि धनको अभावमा पनि सम्पन्न गर्ण सकिने उपाय बताउनु हवस् ।
त्यसका दीन वचन सुनेर ऋषिले भन्नुभयो – तिमी वैशाख शुक्ल एकादशीको व्रत गर । यस एकादशीको नाम मोहिनी हो र यसबाट तिम्रा संपूर्ण पाप नष्ट हुनेछन् । मुनिका वचन सुनेर ऊ अत्यंत प्रसन्न भयो र ऋषिद्वारा बताइएको विधिअनुसार उसले मोहिनी एकादशीको व्रत गर्यो । हे राम ! यस व्रतको प्रभावबाट उसका सबै पाप नष्ट भए र अंतमा ऊ गरुड़मा चढेर विष्णुलोक गयो । यस व्रतबाट मोह आदि संपूर्ण बन्धनहरू नष्ट हुन पुग्छन् । संसारमा यस व्रतभन्दा श्रेष्ठ अन्य कुनै व्रत छैन । यसको माहात्म्य पढ्दा अथवा सुन्दा एक हजार गौदानको फल प्राप्त हुन्छ ।
भारतसँगको सन्धि–सम्झौता पुराना भइसके : प्रदीप गिरी
August 26, 2019 JB Puri 0
व्यवसायसँगै राजनीतिमा पनि सफल महिला व्यक्तित्व विमला शर्मा(चौलागाई)
December 2, 2018 JB Puri 0
August 30, 2019 JB Puri 0